“Ngwọta Ndị Na-adịgide Adịgide. Irgba mmiri nke ọma. ” - Potatoes News
“Sustainable-adịgide adịgide. Irgba mmiri nke ọma. ”
Ulo oru ugbo - tinyere ma nduku na ulo oru ugbo - enweela nsogbu ndi ozo iji merie na afo gara aga. Site n'ike na resili, ụlọ ọrụ anyị nwere ike imeghari ma chọta ihe ngwọta na ihu igwe ma merie ihe mgbochi ndị a, wee pụta dị ka ihe siri ike ma dị mkpa. N'afọ a, Irtù Mmiri riggba Mmiri (IA) na-aga n'ihu na isiokwu a nke ịchọta ihe ngwọta ka ọ na-akwadebe maka Smart Irrigation Month.
Isiokwu 2021 maka ọnwa ọgbụgba mmiri Smart bụ “ọgbụgba mmiri dị mma. Azịza ndị na-adịgide adịgide. ” N'ime ọnwa Julaị niile, IA na ndị otu ya ga na-akwalite otu esi eji teknụzụ na ịmị mkpụrụ mmiri na-eweta azịza maka nsogbu taa na echi na ụlọ ọrụ ịgba mmiri.
Innovation juputara na otutu ulo oru ndi oru ugbo. Ntughari ohuru na-eduga n'inwekwu mbọ iji weta ọkwa ọhụụ nke ga-enwe mmetụta karịrị ụlọ ọrụ anyị. Ebumnuche anyị bụ na ọrụ anyị anaghị akwado naanị gị, dịka akụkụ dị mkpa nke ụlọ ọrụ na-emepụta nri, kamakwa na ọ na-akwado ọdịnihu nke mkpokọta anyị site na iji mmiri ogbugba mmiri kachasị mma, otu n'ime akụ anyị dị oke ọnụ ahịa bara uru.
Ọnwa ọgbụgba mmiri Smart Smart bụ mkpọsa ụlọ ọrụ gafere-kwa ụbọchị ana-eme kwa ọnwa Julaị iji mee ka mmata ọ bara uru iji mmiri mee ihe yana ịkọwanye maka ngwaahịa, omume na ọrụ nchekwa mmiri. Kwa afọ, atụmatụ a na-ebuwanye ibu, yana ọtụtụ ụlọ ọrụ ag na-esonye iji gbasaa ozi gbasara mkpa ọrụ ịgba mmiri dị mma yana iji kwalite usoro ịgbara mmiri nke ọma na teknụzụ.
Nke a bụ otu ị ga - esi tinye aka na isonye na Smart Irrigation Month. Ikwesighi ịbụ onye otu Irrigation Association, n'agbanyeghị na akwadoro m isonye. Ọnwa Smart Smart bụ maka onye ọ bụla isonye na ime ememme.
Akpọpụtara Tuesday mbụ nke Julaị ka Teknụzụ Tuesday. Dị ka akụkụ nke a kickoff ka Smart Irrigation Month, ị ga-ahụ ndị na ụlọ ọrụ yi-acha anụnụ anụnụ na July 6. Sonyere anyị na-eyi-acha anụnụ anụnụ na Technology Tuesday na-egosi gị nkwado nke oru oma ogbugba mmiri n'ubi. Denye foto gi na soshal midia were #smartirrigationmonth ka i buru akuku bulie ife a.
IA na-enye ngwaọrụ na www.smartirrigationmonth.org n'ihi na ị na-eji na-egosi na ị bụ onye ndú n'etiti ndị ọgbọ gị na showcasing smart ogbugba mmiri n'ubi omume, smart teknụzụ na smart ngwaahịa. Jiri ngwaọrụ ndị a na mgbasa ozi mmekọrịta, yana akara ngosi Smart Irrigation Month, iji gosipụta usoro ịkọ ugbo mara mma.
Anyị na-agbakwa gị ume ka gị na ndị mgbasa ozi mpaghara gị, kesaa akụkọ gbasara azụmahịa gị ma ọ bụ ọrụ ugbo gị, ma gwa gị ihe kpatara ị ga-eji mee ememme Smart Irrigation Month na July. Were ọrụ nke onye na-akwado ụlọ ọrụ gị site na ịgwa ndị na-achịkwa gị na ndị omebe iwu okwu. Kpọọ ha ka ha gaa n'ugbo gị wee hụ ihe ngwọta ogbugba mmiri nke ọma gị. Gwa ha ka ha mee ememme Smart Irrigation Month. N'ihi na ọgbugba mmiri n'ume nwere ike ịba uru na uru gburugburu ebe obibi, nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya na nke akụ na ụba, yana nkwado, ọ ga-eju gị anya ole ndị isi gọọmentị ga-achọ isonye na izi ozi a.
Chọrọ ịmatakwu ihe?
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmụtakwu banyere teknụzụ na usoro ịgba mmiri ọgbụgba, anyị na-agba gị ume ịbịa leta anyị na Disemba 6-10 a na 2021 Irrigation Show & Education Week na San Diego. N'ebe ngosi ogbugba mmiri ị ga - enwe ike ọ bụghị naanị ịmụ maka teknụzụ ndị ọhụrụ na usoro ịgbara mmiri, kamakwa ịmụ n'aka ndị ọkachamara banyere etu teknụzụ ọgbụgba mmiri ndị a dị mma si eme ihe dị iche. Iji mụtakwuo banyere Irrigation Show, gaa na www.funtunye.org.
Ka anyi na esonye iji mee emume Smart Irrigation Month na July a, ka anyi cheta na ogbugba mmiri nke oma amaghi ebido na July 1 ma o bido na Julai 31. Anyi kwesiri ime onu mmiri ogbugba mmiri nke oma na uzo ga adigide ya na ewetara anyi n’ile. Ka anyi jikoo aka onu tolite ohere di iche-iche abughi naani iwere omume ndi a kachasi nma kamakwa inye ya oria dika otu esi eme ogbugba mmiri. Ngwaọrụ dị na www.smartirrigationmonth.org na www.frigre.org dị ukwuu na-amalite ime ka nke a mee.
Jon Topham bụ onye isi ndị ọrụ na Ntughari mmiri & Ewu LLC na Patterson, Calif., na onye bụbu onye isi ala nke Irrigation Association.
Na-aleụrị Ngwọta Na-adịgide Adịgide
Tags: usoro ogbugba mmiri n'ubiNduku ogbugba mmiri n'ubiNkenke Mmirismart ugbo
Spore trapping technology soro mbubreyo blight
Israel mmalite SupPlant: sensọ-enweghị mmiri ogbugba mmiri n'ubi
Onye enyemaka mbu mebere AI nke emere maka oru ugbo
Ogo nduku nke India
Nduku buru ibu na-achọ ngwa ngwa n'oge ọrịa na-efe efe
Obosara n'etiti ahịrị site na 28 ruo 38 ″ - olee otú kacha mma?